100% Qinisekile JUSTFOG 1500mah Zonke kwelinye Inkungu 1 Ikhithi yokuqalisa phezulu ngokugcwalisa uhlelo in isitokwe Svapor Isitolo esidayisa yonke impahla - China DongGuang BEC Technology
100% Qinisekile JUSTFOG 1500mah Zonke kwelinye Inkungu 1 Ikhithi yokuqalisa phezulu ngokugcwalisa uhlelo in isitokwe Svapor Isitolo esidayisa yonke impahla
Ngokukhethekile yakhelwe Anti-namathe Ikhoyili
Top Ukugcwalisa System
JUSTFOG FOG1 Kit iza ibhethri 1500mAh futhi 2ml umthamo. It uyisibonelo esifaneleka kahle somuntu lokuvikeleka ukuvulwa uhlelo lwayo childproof nokuvikelwa anti-namathe isihlangu. Okufakiwe ukugcwaliswa phezulu, replaceable ithangi tube, futhi ukubukeka metal-camera, kule khithi likhona lapha kuwe. Kuyinto kit kokubili temusho kanye nezingqalabutho. Kungakhathaliseki wena ifu Chaser noma ukunambitheka Chaser, kule khithi Ungahlala ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Justfog FOG1 Kit Okuthengisa Point
1. Simple top-ukugcwaliswa uhlelo
2. Easy-to-esikhundleni tube ketshezi
3. Childproof uhlelo ukuvulwa
4. 100% Japanese organic ikhoyili ukotini
5. Smart umsebenzi Ukuvikelwa ibhethri
Ikhoyili Ukumelana 0.5Ω / 0.8Ω
tank Umthamo 2ml
ibhethri Umthamo 1500mAh
umzimba Material Insimbi engagqwali, PC tube kusukela Bayer Germany
Uhlobo ukushaja Micro 5 PIN ye-USB encane
imibala Mnyama, Isiliva
Justfog FOG1 Kit Ukupakisha ohlwini
1 x ibhethri
1 x Ikhoyili eyisilinda (0.5Ω)
1 x Ikhoyili eyisilinda (0.8Ω)
3 x Inner O-ring (omhlophe)
Previous: 2017 entsha Childproof Opening System E-CIG Kit 100% EU TPD Imithetho vapoizer 900mah J-lula Justfog P16A ukuziqalela ikhithi intengo ifektri Isitolo esidayisa yonke impahla
Okulandelayo: Isitolo esidayisa yonke impahla Justfog e usikilidi Qinisekile Justfog Q16 Clearomizer / Atomizer / Tank
Justfog othile ongumRom
Justfog Ukulekelela Tube 18350
Justfog E obhemayo
Original Justfog Q14 Kit Compact nge 900mAh Ba ...